Kunamata Points Kwemwedzi weEmber | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kwemwedzi weEmber
Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoinzi em ember mwedzi. Munzvimbo zhinji dzenyika, iyo ember mwedzi inozivikanwa nehukuru hwakaipa. Kune zvinyorwa, iyo ember mwedzi ndiGunyana, Gumiguru, Mbudzi, uye Zvita. Munzvimbo zhinji, kunyanya Nigeria, tinoisa iyi mwedzi nehungwaru nekuti tinotya zvakaipa zvinouya nemwedzi mina yekupedzisira inopera gore.
Zvakadaro, bhaibheri rakatiita kuti tinzwisise kuti hapana zuva kana mwedzi wakatarwa unoratidzwa nehuipi. Mazuva ose akazara nezvakaipa; ndizvo zvakataurwa nerugwaro. Asi isu tinogona kununura zuva rega rega nemwedzi neropa rakakosha raKristu Jesu. Kunyangwe ihwo huipi hunokanganisa iyo ember mwedzi, ivo vakagadzirirwawo kune makuru makomborero uye kubudirira. Kune vanhu vazhinji vane minamato isina mhinduro inopindurwa mwedzi uno. Vamwe vanhu vanozowana kukwidziridzwa, kuwana iyo vhiza, kusangana nemurume anotya Mwari mumwedzi yeember.
Mweya waIshe wakazivisa kwandiri kuti vanhu vazhinji vari kukodzera kukomborerwa, uye vanozokomborerwa zvisingaite mumwedzi yeember. Sezvo zvinopesana nepfungwa dzakakurumbira dzevanhu pamusoro pemwedzi uno, Ishe vakavimbisa kuti hakuzove nerufu asi mufaro uye mufaro mukati mese. Zvirongwa zvemuvengi kukonzera chero munhu kugumisa gore 2021 nemarwadzo nekutambura zvakaitwa zvisina mwero neropa raJesu. Kune avo vanotarisa kuna Mwari nekuda kwechibereko chechibereko, Ishe vachakushamisa iwe mune ino yekupedzisira mwedzi mina yegore. Kunyara kwako uye kunyadziswa kunozopera mune ino ember mwedzi muzita raJesu.
Ishe vachakupa chikonzero chekunyemwerera. Nyika yako haichazonzi dongo zvakare. Hauchazosekizve. Ngatinamatei pamwe chete mumwedzi yeember, uye isu tinotenda kuti Mwari achazadzisa zvese zvinotinetsa.
Ishe Jesu, ndinokukudzai nekuda kwenyasha dzamakandipa kuti ndione kutanga kwemwedzi mina yekupedzisira inopedza gore. Ndinokutendai nekuchengetedza hupenyu hwangu. Pamusoro pegore rino, vazhinji vakafa, vazhinji vakavigwa, vakapambwa, vazhinji vachiri muchipatara, asi nyasha dzenyu dzakandichengeta kusvika apa. Ndinodzorera kubwinya nekukudza kuzita renyu dzvene.
Baba Tenzi ndinokumbira ruregerero rwezvivi. Munzvimbo dzese dzehupenyu dzandakatadza uye ndikakundikana nokubwinya kwako, ndinonamata kuti undiregerere muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa, kunyangwe zvivi zvangu zvakatsvuka serutsvuku, zvichaitwa chena kupfuura chando; kana zviri zvishava somuti mushava, zvichaitwa chena kupfuura mvere. Baba Tenzi, ndinonamatira ruregerero rwechivi changu, Ishe ndiregerereiwo zvitadzo zvangu zvese muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti sezvo gore rino rava kunopera, hupenyu hwangu hahuendi, hupenyu hwemurume wangu nevana hahuzoenda nahwo, hupenyu hwemhuri yangu neshamwari hurege kuenda nawo muzita zvaJesu. Ndinokumbira kuti iwe utidzivirire nesimba rako, uye iwe uise mucherechedzo wako patiri tese kuti kana ngirozi yerufu nekusuwa ikationa, hazvingaswedere pedyo nesu muzita raJesu.
Ishe, hosha dzese dzehurwere dzakagadzirirwa muvengi wangu neveimba yangu mumwedzi wemwedzi, ndinouparadza nemoto muzita raJesu. Ndino vhara nhengo yese yemhuri yangu neropa rakakosha raJesu. Kurwara hakuzove nenzvimbo mumba medu muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinodzikinura mazuva asara mugore rino neropa renyu rakakosha. Chero huipi hwakasungirirwa kumwedzi weEmber hausvike padhuze nepandinogara. Ndinobvisa huipi hwemwedzi iyi, uye ndinoitsiva nemufaro uye nemufaro muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti mugozadzikisa zvese zvinondinetsa mumwedzi uno wekubata. Munzvimbo dzese dzehupenyu dzandatarisira kwauri mhinduro, Ishe, ndinonamata kuti mundipindure. Iwe uchapa mhinduro kuminamato yangu yese muzita raJesu. Dambudziko riya rakaramba richiita kuti ndicheme. Ndinonamata kuti muzoibvisa mumwedzi iyi muzita raJesu.
Baba Tenzi, gore rino harifanire kumedza maropafadzo angu. Ndinoraira nemasimba edenga, chikomborero changu icho chakanamirwa pagore ra2021 chiburitswe nhasi muzita raJesu. Ndinoraira nesimba rematenga, dai mutumwa waIshe asunungura maropafadzo kwandiri nhasi muzita raJesu.
Ishe, kunyara nekuzvidzwa kwangu kuchapera mumwedzi weember. Ndinotema chibereko muhupenyu hwangu muzita ra. Ndinoraira kuti mufaro usingaperi wemweya mutsvene uchafukidza hupenyu hwangu nhasi muzita raJesu. Ishe, handichazozivi kusuwa zvakare. Mwedzi uno ember ndiwo uchave mugumo wekurwadziwa nekusuwa kwangu muzita raJesu.
Ishe, ndinotaura kusimudzirwa kwangu kuti kuve kwechokwadi nhasi. Ndakagara kwenguva yakareba munzvimbo imwechete. Ndinokumbira kuti mutumwa waIshe andisimudzire kune imwe nhanho muzita raJesu. Izvi hazvingapere neni ndiri munzvimbo imwechete. Ini ndinotaura kukwira kwangu kuva kwechokwadi nesimba muzita raJesu.
Ishe, ndinosangana nemhando dzose dzekusabereka mandiri. Ndinoparadza joko raro muzita raJesu. Ishe, ndinotema nyika yangu haichazonzi dongo zvakare. Ndichava nezvibereko. Ini ndinouya kushaya mbereko yakandiita chinhu chinosekwa. Ndinoraira kuti mwedzi uno wekumira ndiko kupera kwawo muzita raJesu. Ishe vakapindura munamato waHana, ndinodana zita renyu nhasi, ndipindurei mumwedzi uno wezita muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti ndipedze gore rino nemufaro. Mhando dzose dzeshungu dzinobviswa. Ndinoraira kuti moto waIshe unobvisa mhando dzese dzekunyomba muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Points YeRuponeso
inotevera30 Ndima dzeBhaibheri dzekudzivirira
Kunamata Points Kune Anorwara Shamwari